Serivisy an-tserasera 7 tsara indrindra ho an'ny olona hanoratra lahatsoratra. | la-manette.com
Serivisy an-tserasera 7 tsara indrindra ho an'ny olona hanoratra lahatsoratra.
29 février 2021 feh Trawl tsara tarehy
Ao amin'ny tontolon'ny matihanina dia maro ny tetikasa atao miaraka amin'ny ekipa, ary ny asa fanoratana dia tsy misy afa-tsy. Ny tonian-dahatsoratra dia tokony hanangona vaovao avy amin'ny loharanony, hahazo valiny avy amin'ny tonian-dahatsoratra, ary hampandre ny mpandray anjara.
Na izany aza, ny fiaraha-miasa am-pahombiazana amin'izany fomba izany dia mety ho fanamby tena izy, indrindra ho an'ireo mpiasa lavitra, izay mitombo hatrany ny isany. Soa ihany fa misy fitaovana an-tserasera marobe azo ampiasaina hanamora ity karazana fiaraha-miasa ity sy hanatsarana ny vokatra.
Ny fampiharana sahaza ho an'ny tetik'asa fanoratanao kopia dia miankina amin'ny filana manokana amin'ny ekipanao sy ny karazana asa atao. Nanangona ny sasany amin'ireo fitaovana fiaraha-miasa an-tserasera tsara indrindra izahay mba hanampiana ireo mpikambana ao amin'ny ekipa hanoratra, hanitsy ary hijery antontan-taratasy amin'ny fotoana tena izy.
Inona no tadiavina amin'ny fitaovana fanoratana fiaraha-miasa an-tserasera
Alohan'ny handinihana ireo fitaovana fanoratana fiaraha-miasa amin'ny Internet dia zava-dehibe ny mahatakatra ny fepetra ampiasaina hanombanana azy ireo. Ireto misy endri-javatra manan-danja sasany iraisan'ny crème amin'ny vokatra:
Fizarana tsotra: Mamela ny mpiasa tsirairay hiditra mora foana amin'ny antontan-taratasy ve ilay fitaovana, hijery ny fanavaozana farany ary hanao ny asany?
Fidirana miaraka: Afaka miara-miasa amin'ny antontan-taratasy ve ny olona maromaro tsy misy fikorontanana? Ny fitaovana sasany dia mitantana ity karazana fidirana miaraka ity tsara kokoa noho ny hafa.
Afaka maneho hevitra : Ny tamberina dia singa tena ilaina amin'ny tetikasa fanoratana rehetra. Noho izany, fitaovana mahomby dia ahafahana manome hevitra mora foana amin'ny ampahany amin'ny antontan-taratasy.
Fanaraha-maso version : Rehefa misy olona maromaro manova antontan-taratasy dia tsy maintsy afaka mijery ireo fanovana natao hatramin'ny nidiranao farany ianao.
Fampiasana markdown : Ny fitaovana fanoratana fiaraha-miasa tsara indrindra dia manolotra fanohanana Markdown ahafahan'ny mpanoratra mamolavola ny kopiany nefa tsy mampiasa marika mahazatra.
Fanondranana mora azo: Mitadiava fampiharana fanoratana izay manolotra endrika fanondranana isan-karazany, ao anatin'izany ny PDF, EPUB, ary Microsoft Word.
Raha fitaovana maro no ahitana fara-fahakeliny iray na roa amin'ireo endri-javatra tena ilaina voalaza etsy ambony, ity lisitry ny fampiharana manaraka ity dia nisongadina tamin'ny vahoaka tamin'ny fanolorana ny ankamaroan'ireo fahaiza-manao ireo.
Serivisy an-tserasera tsara indrindra ho an'ny olona hanoratra lahatsoratra.
Tsy mahagaga raha manana mpampiasa efa ho roa lavitrisa isam-bolana ny Google's G Suite productivity suite: fitambarana fampiharana maimaim-poana izay mifandray ho azy amin'ny kaonty Google rehetra, ary mora ampiasaina.
Google Docs, fitaovana fanoratana an'ny suite, dia feno endri-javatra izay mahatonga ny fiaraha-miasa ho dingana tsy misy dikany. Ny fitaovana dia miavaka amin'ny fidirana miaraka, mamela ny mpiara-miasa hiasa amin'ny antontan-taratasy miaraka amin'ny fotoana iray ihany ary afaka mahita ny fanovana nataon'ny hafa. Ny tsara indrindra, ny fanovana ataonao amin'ny antontan-taratasy dia voatahiry ho azy, ka tsy mila manahy momba ny fahaverezan'ny asanao ianao.
Ny endri-javatra hafa mendri-piderana amin'ny Google Docs dia misy ny fahafahana maneho hevitra mora foana amin'ny antontan-taratasy iray sy ny fomba fiasa "sosoka fanovana" izay afaka manampy anao hahita ny fanamboarana sy fanatsarana azo atao. Google Docs koa dia manolotra tantara fanavaozana isan-karazany izay mampahafantatra anao ny fotoana nanaovana ny fanovana tsirairay sy ny nataon'iza.
Draft dia fitaovana fanoratana lehibe hafa ahafahan'ny mpandray anjara maro hanova antontan-taratasy miaraka amin'ny fotoana iray ihany. Sahala amin'ny Google Docs, maimaim-poana ny vokatra, saingy hafa kely ny fizotran'ny fanodinana ny fanovana.
Tsy hita taratra avy hatrany ao amin'ny lahatsoratry ny antontan-taratasy ny fiovana; misy dikan-teny nohavaozina amin'ny antontan-taratasy noforonina isaky ny ekena ny fanovana ataon'ny olona iray. Na dia manamora ny fanaraha-maso sy ny fahatakarana ny tantaran'ny kinova an'ny antontan-taratasy aza ity dingana ity, dia mety hiteraka olana izany satria ny mpanoratra voalohany an'ilay antontan-taratasy ihany no afaka manaiky na mandà ny fanovana.
Ny Draft dia manamora ny fanafarana sy ny fampidirana sary amin'ny antontan-taratasinao, ary manolotra safidy fanondranana maromaro mihoatra ny endri-tsoratra sy HTML mahazatra. Azonao atao ny misintona ny antontan-taratasinao ho rakitra Microsoft Word, azonao atao ny mitahiry azy ho Google Doc, na azonao atao mihitsy aza ny misintona azy amin'ny endrika Markdown ho mora styling.
Raha tianao ny hampiantrano fitaovana fanoratana fiaraha-miasa toy izay miantehitra amin'ny lohamilina ao amin'ny rahona, Etherpad no mety ho safidy mety aminao.
Ity fitaovana open-source ity dia ahafahan'ny mpanoratra sy ny tonian-dahatsoratra hiara-hiasa amin'ny fotoana tena izy. Ny olona tsirairay miasa amin'ny antontan-taratasy dia nomena loko manokana, ary ny fiovan'izy ireo dia asongadina amin'io loko io. Noho izany, rehefa miara-miasa amin'ny antontan-taratasy iray ny mpiara-miasa maromaro, dia mora ny mahita hoe iza no manao inona.
Ny endrika interface tsara Ethernet dia somary fototra raha oharina amin'ny fitaovana hafa, ary ny fampiharana dia manana endrika endrika kely kokoa ary voafetra ny fahafahana mampiditra singa sasany toy ny fanamarihana ambany pejy. Na izany aza, safidy tsara ho an'ny mpiara-miasa izay tia interface tsara tsy misy fanelingelenana.
4. Microsoft Word amin'ny Internet
Ny Microsoft Word no fitaovana fanoratana sy fanitsiana nandritra ny am-polony taona maro, saingy tato anatin'ny taona vitsivitsy izay no nanaporofoan'ny suite fampiharana tranonkala maimaim-poana an'i Microsoft fa marina ny G Suite an'ny Google.
Vakio ihany koa: Attack On Titan: Taona, haavony ary daty nahaterahan'ny mpilalao fototra tsirairay
Ny Microsoft Word Online dia manolotra endri-javatra sy tombotsoa mitovy amin'ny Google Docs, saingy misy antony vitsivitsy vitsivitsy hisafidianana ny vokatra Microsoft noho ny an'ny Google:
Mifanaraka amin'ny Office : Raha mampiasa fampiharana biraon'ny Office tsy tapaka ianao, dia manamora ny fanitsiana ny antontan-taratasy ny Microsoft Word Online rehefa lavitra ny solosainao mahazatra ianao.
fanehoan-kevitra : Ny Word Online dia manome boaty fisavana misy fanehoan-kevitra azo jerena rehefa vita ny fepetra takiana.
Dinidinika vondrona : Raha misy olona mihoatra ny iray manova antontan-taratasy Word Online dia azonao atao ny manindry ny bokotra Skype hanombohana resaka vondrona. Na dia tsy miasa mavitrika amin'ny antontan-taratasy aza ianao dia afaka miditra amin'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny alàlan'ny Skype amin'ny navigateur na telefaona.
Raha ny Microsoft Word Online dia azo antoka fa tsy ahitana ny endri-javatra rehetra hita ao amin'ny kinova desktop ny vokatra, ny fampiasany dia matanjaka tsara ho an'ny fampiharana fanoratana an-tserasera. Amin'ny maha-bonus, azonao atao ny mizara ity fitaovana ity amin'ny olon-kafa, na dia tsy manana kaonty Microsoft aza izy ireo.
bola sary : Iza P
Ny Quip dia mihoatra noho ny processeur teny an-tserasera fotsiny: sehatra fitantanana votoaty feno ho an'ny ekipa izy io.
Ity fitaovana ity dia manolotra endri-javatra vaovao tsy hita amin'ny fampiharana fanoratana nentim-paharazana. Ohatra, ny tontonana sisiny hita eo am-panovàna antontan-taratasy dia mampiseho fikorianan'ny fanehoan-kevitra sy fanavaozana mitohy amin'ny antontan-taratasy. Ity fahana ity dia manamora ny fijanonana amin'ireo fanovana vao haingana sy izay nanao ireo fanovana ireo.
Ny sehatra Quip koa dia ahafahan'ny mpampiasa manampy GIF sy emojis amin'ny fanehoan-kevitra, ary ny mpikambana ao amin'ny ekipa dia manana fahafahana "tia" fanehoan-kevitra. Ireo endri-javatra ireo dia manampy fahafinaretana amin'ny fizotran'ny fiaraha-miasa ary mandrisika ny fifandraisana. Ho fanampin'ny fanehoan-kevitra ao amin'ny antontan-taratasy, Quip dia manolotra fampiasa amin'ny chat, ka ny mpikambana ao amin'ny ekipa dia afaka miresaka momba ny asany ao anatin'ny sehatra fa tsy mifindra amin'ny Slack na fitaovana hafa. hafatra.
Dropbox efa ela no sehatra fifampizaràna antontan-taratasy lehibe; Ankehitriny, ny fampiharana Dropbox Paper mifototra amin'ny rahona dia manampy endri-javatra vaovao hanatsorana ny fanoratana votoaty miara-miasa.
Ny interface tsara sy madio an'ny fampiharana dia mitazona anao hifantoka amin'ny asa eo am-pelatanana, ary mora ampiasaina sy mampahatsiahy ny Google Docs ny endri-javatra fanehoan-kevitra. Ny Dropbox Paper koa dia manohana ny endrika Markdown ary manome ny kaody Markdown anao eo an-toerana mba hahafahanao mahita avy hatrany ny endriky ny antontan-taratasinao.
Vakio ihany koa: Ny milina karaoke 5 tsara indrindra
Ny Dropbox Paper dia mety ho safidy tsara amin'ny fitazonana ny tetikasa iray, satria manome ny mpampiasa ny fahafahana mamorona lisitra tokony hatao ary mampahafantatra ny mpikambana hafa ao amin'ny ekipa rehefa mila ny sain'izy ireo ny asa iray. Raha te hisarihana ny sain'ny olona iray amin'ny fanehoan-kevitra manokana ianao, ny hany ilainao atao dia ny soraty ny famantarana “@” eo anoloan'ny anaran'ny mpikambana mifandraika amin'ny ekipa mba hampandrenesana azy.
Raha manana programmer ianao na mpikambana ao amin'ny ekipa mahay ara-teknika, dia ho hitan'izy ireo avy hatrany ny fitoviana misy eo amin'i Penflip sy GitHub. Raha ny marina, ny mpampiasa sasany dia miantso ny fampiharana "ny GitHub amin'ny fanoratana" satria manolotra endri-javatra maro mitovy izy, ao anatin'izany ny fiaraha-miasa, ny fanaraha-maso ny dikan-teny, ary ny lafiny tambajotra sosialy. Ny fahasamihafana dia ny Penflip dia natao hamoronana prosa fa tsy code.
Tahaka ny DropBox Paper, ny endrika minimalista an'ny Penflip dia ahafahanao mifantoka amin'ny fanoratana. Ny fiasa famoahana azy dia manolotra safidy amin'ny endrika fanondranana maro ao anatin'izany ny HTML, EPUB, ary PDF. Ny format Markdown dia hita ao amin'ny tonian-dahatsoratra Penflip, fa azonao atao koa ny mampiasa ny tonian-dahatsoratra tianao ary avy eo manosika ny asanao any amin'ny tahiry Penflip anao.
Avy amin'ny fomba fijery fiaraha-miasa, ny hany tsy azo ihodivirana amin'ny Penflip dia ny fampiasany fanehoan-kevitra. Ny fanehoan-kevitra dia tsy voatahiry ao amin'ny antontan-taratasy ihany, fa amin'ny fizarana mitokana ho an'ny tetikasa tsirairay. Mety hanasarotra kokoa ny fifampiraharahana amin'ny zotra mandroso izany rehefa miara-miasa amin'olona maro.
Miaraka amin'ny asa fanoratana mihabetsaka atao lavitra, ny fiaraha-miasa dia tena ilaina amin'ny fahombiazana. Ny fampiharana fanoratana fiaraha-miasa dia tsy mitsitsy fotoana fotsiny, fa manamora ny fizotran'ny fanoratana sy ny fanitsiana ary manamora ny asanao.
Ny fampiharana fanoratana aseho etsy ambony dia manolotra endri-javatra sy fiasa izay mandrisika ny fifandraisana sy ny fiaraha-miasa mahomby. Rehefa manana fitaovana mety amin'ny asa ianao dia afaka mandresy ny fandaharam-potoana mifanipaka sy ny mpikambana ao amin'ny ekipa any amin'ny toerana lavitra mba hamitana ny asa amin'ny fomba mahomby.
Inona no atao hoe e-reputation?
Ahoana ny fomba hidirana amin'ny mpizara Public NoPixel GTA RP: Torolàlana amin'ny dingana mba hilalao Grand Theft Auto Online